आकर्षक तलबका साथ कतारले माग्यो यति धेरै नेपाली कामदार,कति छ तलब ? – ramechhapkhabar.com
आकर्षक तलबका साथ कतारले माग्यो यति धेरै नेपाली कामदार,कति छ तलब ?
काठमाडौं,५ साउन ।
कतारले भारी मात्रामा नेपाली कामदारको माग गरेको छ । कतारको Facilities Managemant & Maintenance कम्पनीले क्लिनर र टेक्निसियन पदका लागी १४२ पुरुष र ३२ महिला गरी १८४ जना नेपाली कामदारको माग गरेको हो ।
तलब खान बस्न सहित ३२ हजार देखि ७१ हजार सम्म तलब सुविधा रहेको छ । इच्छुक कामदारले मेनपावर soundlines recrument pvt महालक्ष्मीस्थान ललितपुरमा साउन १२ र १३ गते अन्तरवार्ता दिनु पर्ने छ ।